Mpiasan'ny FOFIFA: Fito (07) volana tsy nandray karama
mercredi, 07 octobre 2020 21:14
Ny volana martsa 2020, fito volana lasa izay, no nandray karama farany ireo mpiasan’ny FOFIFA (Foibe Fikarohana momba ny Fambolena sy Fiompiana Ampiharina ho Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra).
Mampiana-janaka, niaritra ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana, manofa trano, mamelom-bady aman-janaka… Mitaraina ireo mpiasan’ny FOFIFA fa tena mijaly tsy misy isarongitina intsony ka manaitra ny mpitondra fanjakana hamaha ny olana.
Raha nandalo tao Antsirabe renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ny filoham-pirenena ny 28 Aogositra 2020, nametraka ny vato fototry ny Abatoara ao Tsivatrinikamo, dia nilaza fa tena mampalahelo tokoa ny zava-misy ka nanome herinandro ny Minisitry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ho tsy maintsy voaloa avokoa ny karaman'ny mpiasan’ny FOFIFA manerana an’i Madagasikara fa indrindra ny tao Antsirabe.
Nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena fa hojerena miaraka amin'ny minisitra koa ny an'ny Mpiasa ao amin'ny "budget autonome" havadika ho "budget général" mba tsy hiverimberenan'ny fahataran'ny karama intsony.
“Niezaka ihany izahay nangina, nihafy ary nandefitra. Eny fa na dia tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana aza, tsy mba nisitraka fanampiana na tosika toy ny olona sahirana rehetra ireny, satria efa mpiasam-panjakana hono ka tsy mahazo anjara amin'izany”, hoy ireo mpiasa miandrandra ny valin-katsembohany.
Maherin’ny 200 eo ireo mpiasan’ny FOFIFA mbola “budget autonome” izay tokony hivadika “budget général”.